အွန်လိုင်းစကားသံကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ကဘယ်လို - အွန်လိုင်းန်ဆောင်မှုများ - 2019
Microsoft Word ကို Indent နှင့်အကွာတန်ဖိုးများအတွက် default အရသိရသည်စီစဉ်ပေးနေကြသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သူတို့သည်အစဉ်မပြတ်သင်၏အလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်တစ်ဦးကိုဆရာသို့မဟုတ်ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များကိုကိုက်ညီရန်ချိန်ညှိခြင်းဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်နှုတ်ကပတ်တော်၌ Indent ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်။
နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာစံထစ် - စာရွက်စာတမ်း၏စာသားအကြောင်းအရာနှင့်စာရွက်ရဲ့ဘယ်ဘက်နှင့် / သို့မဟုတ်ညာဘက်အစွန်းအကြားအကွာအဝေးသည်အဖြစ်က default program ကိုတပ်ဆင်လိုင်းများနှင့်အပိုဒ် (ကြားကာလ) တို့အကြား။ ဒါဟာစာသားရဲ့ပုံစံချပေး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်မှတ်တမ်းများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေစဉ်ကမပါဘဲလုပ်ဖို့ခက်ခဲလျှင်မရဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ကိုယ့်ကို Microsoft ကနေအစီအစဉ်ကို၌ရှိသကဲ့သို့, သင်ကစာသားအရွယ်အစားနှင့်ဖောင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်တစ်ခုကိုပြောင်းလဲနိုင်နှင့်ထစ်၏အရွယ်အစား။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ကဘယ်လိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖတ်ပါ။
1. (သင် padding ကိုထိန်းညှိဖို့လိုခငျြသညျ့အတှကျအစာသားကို Select လုပ်ပါကို Ctrl + တစ်ဦးက).
အဆိုပါ tab ကိုခုနှစ်တွင် 2. "အိမ်" အုပ်စုတစ်စု "Passage" အုပ်စု၏ညာဘက်အောက်ခြေပေါ်မှာတည်ရှိသေးငယ်တဲ့မြှားအပေါ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ပေးတဲ့ dialog box ကိုတိုးချဲ့။
အုပ်စုတစုထဲမှာ set သင်သည်များ၏ရှေ့မှောက်၌ပေါ်လာသောပေးတဲ့ dialog box ကိုခုနှစ်တွင် 3. "အင်တင်းရန်" လိုချင်သောတန်ဖိုးများ, ထို့နောက်သင်နှိပ်နိုင်သည် "အိုကေ".
ကောင်စီ: အဆိုပါပေးတဲ့ dialog box ကိုခုနှစ်, "Passage" ပြတင်းပေါက် "နမူနာ" သငျသညျခကျြခငျြးစာသားအချို့ parameters တွေကိုများ၏ပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုမြင်နိုင်ပါသည်။
စာရွက်ပေါ်တွင်စာသား 4. တည်နေရာသည်သင်၏သတ်မှတ်ထားသော parameters တွေကိုထစ်အညီပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။
indenting အပြင်, သငျသညျမြားကိုလညျးစာသားအတွက်အရွယ်အစားနှင့်လိုင်းအကွာပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ဘယ်လိုအချက်အလက်များအတွက်အောက်ပါလင့်ခ်မှာတင်ဆက်စက္ကူဖတ်ပါ။
ဒိုင်ယာလော့ခ် box ထဲမှာထစ် settings ကို၏သတ်မှတ်ရေး "Passage"
မှန်သော - အသုံးပြုသူသတ်မှတ်ထားသောအကွာအဝေးပေါ်အပိုဒ်၏ညာဘက်အစွန်း၏ရွှေ့ပြောင်းခံရ;
လက်ဝဲ - သုံးစွဲသူများကသတ်မှတ်ထားသောအကွာအဝေးပေါ်အပိုဒ်၏ဘယ်ဘက်အစွန်၏ရွှေ့ပြောင်းခံရ;
အထူး - ဒီ option ကိုသင်တစ်ဦးအပိုဒ် (အပိုဒျ၏ပထမလိုင်းအဘို့အထစ်တစ်ခုအခြို့သောငွေပမာဏကိုသတ်မှတ်ခွင့်ပြု "အင်တင်းရန်" အပိုင်း "ပထမလိုင်း") ။ ဒီကနေသင်တို့ကိုလည်း parameters တွေကိုနှင့်စီမံကိန်း (အပိုဒျသတ်မှတ်နိုင်သည် "Protrusion") ။ အလားတူလုပ်ရပ်များမင်းကို အသုံးပြု. လုပ်ဆောင်ထားနိုင်ပါတယ်။
မှန်မာဂျင် - ဤအကြောင်းအရာသည်စစ်ဆေးနေအသုံးပြုပုံကိုသင် setting များကိုပြောင်းလဲပစ် "ညာဘက်" နှင့် "လက်ဝဲ" အပေါ် "ပြင်ပ" နှင့် "အတွင်းပိုင်း", စာအုပ် format နဲ့ပုံနှိပ်သည့်အခါအထူးသဖြင့်အဆင်ပြေဘယ်။
ကောင်စီ: သင်က default တန်ဖိုးများရာ၌ခန့်ထားပြီပြောင်းလဲမှုများကို save လိုပါကရိုးရှင်းစွာ window ၏အောက်ခြေတွင်သက်ဆိုင်ရာ button ကို click "Passage".
2016 နှင့်ရုံး၏ဆော့ဖ်ဝဲအစိတ်အပိုင်းများ၏အစောပိုင်း version အတွက် - ယခုသင်နှုတ်ကပတ်တော်ကို 2010 ခုနှစ်တွင် Indent ဖို့ဘယ်လိုသိသောကြောင့်အကြောင်း, အားလုံးပါပဲ။ တန်ဖိုးရှိရှိအလုပ်, သင်သာအပြုသဘောရလာဒ်များ။